Phinda Ukukhiqiza Abakhiqizi - China kabusha Ukukhiqiza Suppliers, Factory
Rolling Mill Ezezindlu Uzimele - Laser ambozwe Remanufacturing
Rolling Uhlaka izindlu isigayo ubizwa nangokuthi ugingqe isigayo ukuma, esetshenziswa ukufaka roller, roller ukuzala, roller kudivayisi ukulungiswa, ukuqondisa imishini, njll futhi kubuye obalulekile ingxenye umthwalo aphethe imishini ugingqe. Ivame ukwenziwa ezejwayelekile Castings steel kanye nenqubo yayo asakazwe enquma ukuthi ebusweni umzimba akanawo amandla okusezingeni eliphezulu, ukugqwala ukumelana nezinye ukusebenza. Okuqhubekayo imiphumela umthelela umthwalo e ukusonteka unomphela ahlobene singesifanele futhi obandayo evele esigayweni kweqa, Okwamanje, it is eminye sawohloka ngenxa ukugqwala indaba, eliphumela ukuma olungalungile umqulu ukusebenza kanye roll isipele futhi ukunyakaza ngokweqile umqulu nithela chock ku kweqa isigayo ukuma, okwenza kube nzima ukulawula ngempumelelo imvume phakathi ugingqe isigayo izindlu Uhlaka umqulu nithela chock.
Sifeza ku-site ukukhanda kanye remanufacturing we kweqa izindlu Uhlaka isigayo ngokusebenzisa wokulinganisa laser futhi ethungatha imishini, okungenxa yezimo ezikhethekile mobile imishini machining kwi-site ukulungisa neselula imishini laser ambozwe, ezithinta izinzuzo ukulungisa okusezingeni eliphezulu ngokunemba, bafake ezinhle ukumelana naso futhi kwenze ukugqwala ukumelana ungqimba ambozwe, flatness kakhulu futhi isiphetho abushelelezi ebusweni contact, ngakho-ke, ukuphila inkonzo ugingqe Uhlaka isigayo izindlu is kakhulu ngcono, ngokunemba ugingqe aqinisekisiwe futhi ikhwalithi yomkhiqizo kuyathuthuka.
Ukunemba okuphezulu ntathu after repair of the rolling mill housing frame
Nge ukwamukelwa on-site roughing ithuluzi umshini, laser ambozwe ngu ithuluzi umshini esikhundleni sohlelo manipulator kanye on-site yokuqedela of ithuluzi umshini ngemva laser ambozwe, inqamuka bendabuko ukulungisa indlela yokususa ithuluzi umshini ngemva okokugqoka- indawo roughing, kokufaka manipulator ngoba laser ambozwe, kokukhipha manipulator futhi ukufeza ezipholisha inhlukano ngemva laser ambozwe. Ngemva ukulungisa, degree of sekugcineni, ukunemba ntathu nokubekezelelana weJiyomethri we kweqa izindlu Uhlaka isigayo kuyoba 100% babuyiselwe izidingo ukuklanywa.
inkampani lisungule powder okukhethekile nemengamo nge high anti-ukugqwala, bafake ukumelana namandla kanye ubulukhuni. Okuyixazululayo inkinga yokucindezelwa bondliwe futhi kuvimbela kwemifantu ku ukuqina ungqimba ngenxa kakhulu ngcono umyela ubulukhuni. Ngokusebenzisa kabusha ukukhiqiza kanye ukulungisa, umsebenzi imishini kungathuthukiswa kahle. I-annual nemihuzuko ukulahlekelwa kwamanzi kuyinto ≦ 0.05 mm / ngonyaka nokuphila sevisi iminyaka ≥10.
ukuphathwa ukuphila-umjikelezo ogcwele we izindlu Uhlaka esigayweni rolling
Sithuthukise ukuphila umjikelezo ukuphathwa uhlelo egcwele ugingqe izindlu Uhlaka isigayo kuhlanganise ukuhlolwa, uphethwe, uchwepheshe ithimba kokubonisana, ukubuyekeza, izixazululo yezobuchwepheshe, yokwakheka nokulandelana operation sekulingisa, ukuqaliswa inthanethi, ozolandela isimo yesondlo. Iphrodakthi lilungiswe endaweni ephezulu kanye ngendlela ephezulu ephumelelayo olusekelwe enemininingwane umsebenzi wenethiwekhi uhlelo.
Laser Remanufacturing-Drive Shaft, Wagibela Plate ...
Laser Remanufacturing-Drive Shaft, Plate Wagibela Futhi Okunye Mkhiqizo Series
Laser okufakiwe remanufacturing ubuchwepheshe (laser sebethule yokukhiqiza ubuchwepheshe LMD) iwukuba lifake ungqimba ezondile metal impahla isizinda ngokusebenzisa laser ukushisa umthombo. It has izinzuzo ongaphakeme ukushisa uvo substrate, ezincane ukushisa umthelela, okusezingeni eliphezulu Ukupholisa kwesilinganiso, usayizi amancane okusanhlamvu, kunenze nisondelane Metallurgical, namandla high kunenze nisondelane, njll
Isingeniso imikhiqizo laser ambozwe ka Taier
Wagibela isiguqo ipuleti: i wangenela isiguqo kwedivayisi kwamanethiwekhi ashisayo ugingqe okuqhubekayo efakwe kwi engxenyeni engenhla ubavikele roll chock kanye AGC isilinda ukufeza roll igebe okuvalelisa ukulungiswa we kweqa isigayo futhi ipuleti ukujiya ukulawula futhi liyakwazi ukubuyisela ukuhlukahluka ubukhulu emiqingweni ezahlukene. Siye bamukela laser ambozwe ubuchwepheshe ukuthuthukisa wangenela isiguqo ipuleti ngaphezulu remanufacturing, ngale ndlela, ukumelana ukuwohloka ukugqwala ukumelana kuthiwa ngcono kakhulu, nokuphila inkonzo luyanda izikhathi ezingaphezu kuka-5 uma liqhathaniswa eqeda ezivamile.
-Drive shaft: idrayivu shaft ngoba steel kweqa ukukhiqizwa umugqa ngokuyinhloko yakhiwe phakathi yokuxhuma shaft, ngokuhlanganyela, flat ikhanda emikhonweni nezinye izingxenye ezisemqoka; ngaphansi imvelo zokusebenza izinga lokushisa eliphakeme, umswakama high kanye namandla high, izingxenye ezihlobene kungenzeka sina konakalisa, ezigugile futhi ezilimele. Senza ngokuvumelana namazwi laser ambozwe ubuchwepheshe ukuqhuba laser ambozwe remanufacturing ukukhanda izingxenye ezisemqoka idrayivu shaft nokuqiniswa kwemikhiqizo emisha, kanye nokusimama futhi inkonzo nokuphila we imikhiqizo yathuthuka kakhulu.
Izithombe kwemikhiqizo laser remanufacturing